Big News: Bobby Deol oo wargeyska Mumbia Mirror u xaqiijiyay inuu filimka Housefull 4 sameenayo – Filimside.net
Big News: Bobby Deol oo wargeyska Mumbia Mirror u xaqiijiyay inuu filimka Housefull 4 sameenayo
Bobby Deol wuu soo laabtay weliba si adag ayuu usoo laabanayaa xidigaan 90-maadkii iyo bilawgii qarnigaan ka mid ahaan jiray atoorayaasha aflaanta gadi kareen hogaamiyaasha Bollywood-kana uu ka mid ahaa.
Bobby Deol wuxuu dhawaan dhameestiray duubista filimka Yamla Pagla Deewane 3 oo uu Dharmendra iyo Sunny Deol la jilaayo qorshana yahay in bisha May gudaheeda sanadkaan la daawado.
Haatana wuxuu ku mashquulsan yahay Bobby dhameestirka filimka weyn Race 3 oo jadwalkiisa ugu dambeeyo lagu duubayo magaalada Dubai waxaana la jilayaan Salman Khan, Jacqueline Fernandez, Diasy Shah iyo Anil Kapoor lana daawan doono Eid 2018 ama 15-ka June 2018.
Bobby Deol hadal heyntiisa intaas kuma eko asigoo Dubai ku sugan wuxuu wargeyska caanka ah Mumbai Mirror u xaqiijiyay inuu saxiixday taxanaha hirgalay ee shactirada badan Housefull 4.
Bobby Deol wuxuu si rasmi ah u yiri “Waxaan siweyn ugu hanqal taagayaa la shaqeynta labada Sajid (Sajid Nadiadwala iyo Sajid Khan). Waligeey waan dooni jiray la shaqeynta Sajid Nadiadwala hadana ugu dambeyntii midaas ayaa dhaceyso.”
“Akshay Kumar iyo aniga xiriir wacan oo dhanka shaqada iyo nolosha ayaa naga dhaxeeyo waana ku faraxsanahay inaan mar kale shaashada kasoo wada muuqan doono”
“Housefull 4 waa taxane aad u weyn, waana sugi weesanahay inaan bilaawno koox ahaan shaqada mashruucaan xiisaha badan”
Housefull 4 waxaa la daawan doonaa Diwali 2019 waxaana haatan hogaamiyaal looga dhigay Akshay Kumar, Bobby Deol iyo Retiesh Deshmukh balse weli si rasmi ah shaaca loogama qaadin atirishooyinka la sameyn doonaan.
Bobby Deol iyo Akshay Kumar waa labo saaxiibo ah waxayna horey si wacan iskula jileen afar filim oo kala ah Ajnabee, Dosti: Friends Forever, Ab Tumhare Hawale Waton Saathiyon iyo Thank You haatana mudo 7-sano kadib Housefull 4 ayay ka wada shaqeyn doonaan.